Tag: Hiiraan | Sagal Radio Services
Al-shabaab oo weerar jidgooyo ah ku qaaday guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiil ciidan
Sagal Radio Services • News Report • December 23, 2018
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar dhabo ah oo dagaalamayaasha Al-shabaab ku qaadeen kolanyo gaadiid ah oo la socday guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar iyo saraakiil ciidan oo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Al-Shabaab oo sheegtay in 30 askari ku dishay qarax ciidamo Itoobiyaan lala beegsaday
Sagal Radio Services • News Report • October 29, 2018
Xarakada Al-Shabaab ayaa war ka soo saartay qarax maanta Kolonyo Ciidamo Itoobiyaan lagula eegtay duleedka magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan.
Ciidamo huwan ah oo la wareegay deegaanka Fiidow ee xadka Sh/Dhexe iyo Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • October 23, 2018
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo isugu jira Burundi iyo Jabuutiyaan oo ay wehliyaan ciidan ka tirsan Xoogga dalka ayaa la wareegay deegaano u dhaxeeya Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Ciidanka Xoogga oo kala qaaday maleeshiyaadkii ku dagaalamay Banyaaley
Sagal Radio Services • News Report • June 18, 2017
Ciidamada Xoogga dalka Somaliya ee Gobolka Hiiraan ku sugan, ayaa waxaa u suuragashay inay kala qaadaan laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayaayay Gobolka Hiiraan.
Ururka Alshabaab oo sii daayay shaqaale caafimaad gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • April 7, 2017
Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab uu xalay saqdii dhexe sii daayay shaqaale caafimaad oo Arbacadii gelinkeedii dambe ay ka wateen deegaanka lagu magacaabo Caluula Cad oo 10 KM u jira magaalada Baladweyne.
Xoogagga Xarrakada Al-shabaab oo Afar Ruux ku dishay Deegaanka Ceel-cali ee Gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • October 12, 2016
Wararka naga soo gaaraya Deegaanka Ceel-cali ee gobolka Hiiraan oo maalintii shalay isaga baxeen ciidammada Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka midowga Africa AMISOM.
Ciidamada Itoobiya oo ka baxay deegaan cusub oo ka tirsan Gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • October 11, 2016
Ciidamada Itoobiya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa saaka isaga baxay deegaanka Ceel Cali ee Gobolka Hiiraan, halkaasoo in muddo ah saldhig ku lahaayeen.
Madaafiic lagu garaacay meel ku dhow saldhig ciidamada Ethiopia leeyihiin
Sagal Radio Services • News Report • October 3, 2016
Maamulka deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay weerar madaafiic ah oo saaka lagu qaaday meel ku dhow saldhiga ciidamada Etrhiopia ay ku leeyihiin deegaankaasi.
Wasiir Odawaa “Maamulka loo dhisayo Hiiraan iyo Sh/Dhexe si habsami leh ayuu ku socdaa”
Sagal Radio Services • News Report • September 23, 2016
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo maamulka loo dhisayo Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Siyaasi ku dhowaaqay inuu yahay musharax Madaxweyne maamulka Sh/dhexe iyo Hiiraan(Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • September 8, 2016
Siyaasi Cali Cabdulaahi Cosoble oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka gobolada Hiiraan & Shabelaha dhexe kadib markii uu maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Qariirad ku saabsan dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo la soo saaray
Sagal Radio Services • News Report • August 30, 2016
Urur goboleedka IGAD ayaa lagu wadaa inuu soo bandhigo dhowaan qorshaha lagu dhisayo maamul ay ku mideysan yihiin gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo todobaadkan dib u furmaya
Sagal Radio Services • News Report • August 28, 2016
Waxaa ka socda Muqdisho iyo Jowhar qaban qaabadii u dambeysay ee dib loogu furayo shirkii maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Sh/Dhexe, kaasoo muddo 8 bilood hakad ku jiray.
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo Muqdisho loo soo wareejinayo
Sagal Radio Services • News Report • August 11, 2016
Shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee gogoshiisa taalay magaalada Jowhar ayaa la qorsheynayaa in loo soo raro magaalada Muqdisho, si loo dedejiyo dhismihiisa.
Mahad Cawad iyo Xildhibaano uu horkacayo oo Beledweyn u tagay caleema saarka Ugaas Xasan
Sagal Radio Services • News Report • July 24, 2016
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa goor dhow gaaray magaalada Beledweyn ee xarunta Gobolka Hiiraan.a
Dowladda Soomaaliya, AMISOM iyo Itoobiya oo Qaabab kala duwan uga hadlay Weerarkii Halgan
Sagal Radio Services • News Report • June 10, 2016
Inkastoo la sheegay in Khasaare Culus loogu Geystay Al-shabaab Weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ee Qaybta ka ah AMISOM ee ku yaalla Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan, ayaa haddana Siyaabo kala duwan ay uga Hadleen Wasiirrada Gaashaandhigga iyo Ammaanka Gudaha Soomaaliya, AMISOM, Dowladda Itoobiya iyo Maamulka deegaanka Halgan.
Al-Shabaab oo xalay weerar culus ku qaaday deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • May 16, 2016
Al-Shabaab ayaa xalay weerar xoogan ku qaadan fariisin ciidamada dowladda iyo AMISOM ku lahaayeen deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan, iyadoo Al-Shabaab guulo ka sheegtay.
Wasaaradda A. Gudaha oo rajo ka muujisay in odayaasha ka maqan shirka Jowhar inay ku soo biiraan
Sagal Radio Services • News Report • May 10, 2016
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay Odayaasha dhaqanka ee wali ka maqan shirka Jowhar ee maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inay dhowaan ku soo biiraan.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ka hadlay shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe
Sagal Radio Services • News Report • April 28, 2016
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Sh/Dhexe, isagoo xusay in dhowaan la dhisi doono maamulka labada gobol.
Roob xoog leh oo ka da’ay magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in caawa uu ka da’ay roob lagu diirsaday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Ra’iisul Wasaaraha oo la kulamay qaar ka mid ah Odayaasha Gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • March 23, 2016
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo xalay ku hoyday magaalada Beledweyn ayaa la kulmay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan, iyagoo ka wada hadlay xalinta muranada ka jira shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo rajo kamuujiyay shirka maamul sameynta labada gobol Hiiraan iyo Sh/dhexe
Sagal Radio Services • News Report • March 14, 2016
Guddomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ‘Dabaged’ oo ka hadlay arrimaha dhismaha Maamul u sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabelaha dhexe isagoo rajo kamuujiyay in dib loo bilaabo shirka dhismaha maamulka labada gobol.
Wafdiyo ay kala horkacayaan RW Sharm'arke iyo Wasiirka Difaaca Jabuuti oo Beledweyne Gaaray
Waxaa goor-dhaw soo gaaray degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wafdiyo ay kala hogaaminayaan RW Somalia, Cumar C/rashiid Cali Sharm'arke iyo Wasiirka difaaca Jabuuti Xasan Dharaar Hufane.
Yuusuf Dabageed oo si rasmi ah loogu magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • December 21, 2015
Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) loogu magacaabay xilka Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan, iyadoo xilka laga qaaday C/fataax Xasan Afrax oo Muqdisho u jooga howlo la xiriira baaritaanka kiiskii dilka ahaa ee Sarkaalkii u shaqeynayay Hey’adda Miino baarista ee Mine Action.
Maamulada Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo ka arinsanaya halka lagu qabanayo shirka maamul u sameynta
Sagal Radio Services • News Report • December 17, 2015
Iyadoo aan wali go’aan laga gaarin halka rasmiga ee lagu qabanayo shirka maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo xilliga la qabanayo ayaa waxaa socdo qorshe labada Maamul ay uga arinsanayaan halka lagu qaban doono shirka.
Wafdi ka socda Xukuumadda iyo Maamulka Galmudug oo ku baxay colaadii Beledweyn
Sagal Radio Services • News Report • December 15, 2015
Wafdi heer Wasiir ah oo ka socda Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo uu wehliyo Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan, si ay u kala dhex galaan maleeshiyooyinkii labadii maalmood ku dagaalamayay magaalada.
Wasiirka Amniga oo Guddi baara u magacaabay Sarkaalkii lagu dilay Beledweyn
Sagal Radio Services • News Report • November 16, 2015
Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in Guddi soo baara u magacaabeen dilkii sarkaal ka tirsan Hey’adda Mine Action maalin ka hor loogu geystay magaalada Beledweyn, kaasoo ka dhalatay xiisad.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka soo horjeestey Guddiga Farsamada Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe
Guddoomiyaha Gobalka Hiiraan C/fitaax Xasan Afrax ayaa boggiisa facebook soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo go’aankiisa ku aaday sida uu u arko gudiga farsamo ee shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe qoraanlka hoos ka aqriso.
Guddiga farsamada maamulka gobolada Sh/dhexe iyo Hiraan oo lagu wado in dhowaan lagu dhowaaqo
Sagal Radio Services • News Report • October 22, 2015
Guddiga farsamada ee maamul u sameynta labada gobol ee Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa lagu wadaa in goordhow lagu dhowaaqo kadib markii muddo bil kabadan ay soo jiitamaysay sidii loogu heshiin lahaa qeybsashada xubnaha guddiga farsamada.
Shir looga hadlayay maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ka dhacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • October 11, 2015
Shir loogaga hadlayay qaabka ay beelaha Baadicadde iyo Jajeele ay ugaga qeybgali lahaayeen shirka maamul u sameynta gobolada Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Wasaaradda A. Gudaha oo sheegtay in dhowaan la dhisayo Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe
Sagal Radio Services • News Report • October 6, 2015
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan la guda geli doono howlaha maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo horay loogu heshiiyay in maamul loo sameeyo.
Ciidamada Jabuuti oo la wareegay ammaanka degmada Jalalaqsi (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • September 15, 2015
Ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ayaa shalay si buuxda ula wareegay ammaanka degmada Jalalaqsi, kadib markii ay bedeleen Ciidamadii Burundi ee horay halkaas u joogay.
Furitaanka shirka dhismaha Maamulka Gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo Dib loo Dhigay
Sagal Radio Services • News Report • September 2, 2015
Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Somalia ayaa maanta shaacisay in dib loo dhigay Furitaanka Shirka Dhismaha Maamul ay yeeshaan Gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe; kaasoo Qorshuhu ahaa in uu Furmo berri oo ay ku beegan tahay Taaraariikhdu 01-da September, 2015.
Hab qeybsiga Guddiga farsamada Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo lagu muransan yahay
Sagal Radio Services • News Report • August 17, 2015
Iyadoo maalmihii u dambeeyay shirar u socday Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo saxiixayaasha Maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa soo baxaya muran ka taagan hab qeybsiga xubnaha Guddiga farsamada.
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo la wareegay deegaano ku yaalla galbeedka Hiiraan
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa la wareegay deegaano dhaca Galbeedka Gobolka Hiiraan, kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhigyo Al-Shabaab kaga sugnaayeen halkaas.
Diyaar garowga Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe (Warbixin)
Sagal Radio Services • News Report • July 5, 2015
Iyadoo la soo gaba gabeeyay dhismaha maamul goboleedka Mudug iyo Galgaduud ee Galmudug, kadib markii maalinimadii shalay lagu doortay degmada Cadaado Madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa ayaa waxaa haatan diyaar garow loogu jirtaa dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Kooxo Hubeysan oo xalay mar kale Nabadoon caan ah ku dilay magaalada Beledweyn
Sagal Radio Services • News Report • June 23, 2015
Kooxo Hubeysan ayaa xalay maqribkii waxay ku dileen magaalada Beledweyn Nabadoon caan ahaa oo lagu magacaabayay XasanAadan Deeqow, iyadoo howl gallo ciidamada dowladda ka sameeyeen xaafada lagu soo qabtay labo ruux oo dilkaas lagu tuhmayo.
Ibraahim Xabeeb “illaa Hiiraan Labo gobol laga dhigo, diyaar uma nihin inaan cid wax ku darsano”
Sagal Radio Services • News Report • May 25, 2015
Siyaasiga Ibraahim Xabeeb Nuur oo horay u soo noqday Xildhibaan ka tirsan Baarlamaankii ahaa iyo Wasiir dowladihii KMG ayaa sheegay inay doonayaan in Hiiraan oo labo Gobol ah, isagoo xusay in aanu Gobolka helin xuquuqdii uu lahaa sida Gobolada kale oo kale.
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo la wareegay deegaano u dhaxeeya Beledweyn iyo Buulo Burde
Sagal Radio Services • News Report • March 21, 2015
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda iyo AMISOM oo labo jiho ka kala baxay ay ku dhow yihiin degmada Buulo Burde oo muddo sanad ah ku jirtay xaalad go’doon ah.
Dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jira deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • March 20, 2015
Dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka jira deegaano kamid ah gobolka Hiiraan iyadoo laga dareemayo dhaqdhaqaqaas deegaanada bariga iyo galbeedka gobolka.
Taliska Milateriga oo ka warbixiyay dagaalo ka dhacay inta u dhaxeysa Jalalaqsi iyo Buulo Burde
Taliska ciidanka Milateriga Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dagaalo ka dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka Jalalaqsi iyo Buulo Burde, kadib markii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay wadada u galeen ciidan ka tirsan Milateriga oo ka soo baxay Jalalaqsi, kuna sii jeeday Buulo Burde.
FAAH FAAHIN: socdaalkii madaxweynaha ee magaalada Beledweyn
Sagal Radio Services • News Report • October 25, 2014
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo wafdi ballaaran oo uu horkacayo ayaa gallinkii danbe ee maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ciidanka dowladda oo qabsaday tuulada Baar oo hoos-tagta Beledweyne
Sagal Radio Services • News Report • September 23, 2014
Ciidamada Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa dalka Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta la wareegay deegaa hor leh oo ku yaalla galbeedka Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Gargaar Cuno oo goor-dhaw gaaray degmada Buula-burte ee gobolka Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • September 4, 2014
Wararka naga soo gaaraya degmada Buula-bure ayaa sheegaya in goor dhaw ay halkaa gaareen gadiid xamuul ah oo sidda raashin ka badan 200 oo tan oo uu ku deeqay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaacil Cumar Geelle.
Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM oo la wareegay Deegaano horey gacanta ugu hayeen Al-Shabaab(Daawo Sawirada)
Sagal Radio Services • News Report • August 20, 2014
Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee kasocda Dalka Jabuuti ayaa maalmahan waxa ay howlgalo kawadeen deegaano duleedka ka ah Magaalada Baladweyn ee Xarunta Gobolka Hiiraan Deegaanadaas ay gacanta ku hayeen dagaalyahano katirsan Al-Shabaab.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaaliya oo Tagay Degmada Maxaas ee G/Hiiraan
Sagal Radio Services • News Report • July 26, 2014
Wafdi uu Hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukumadda Soomaaliya C/laahi Goodax Barre ayaa gaaray Degmada Macaas ee Gobolka Hiiraan,waxaana ay Saaka ka Duuleen Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Jabuuti iyo kuwa Itoobiya oo u soo ruuqaansaday Buulo Burde iyo Isgaarsiinta Beledweyn oo go'an
Sagal Radio Services • News Report • March 13, 2014
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isugu jira Ciidamada Jabuuti iyo Itoobiya ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo xoog leh ka wada wadada isku xirta Beledweyn iyo Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan.
Ciidamada Booliska Gobalka Hiraan oo dad iyo Hub kusoo qabtay Howl Galo ay sameyeen
Sagal Radio Services • News Report • December 31, 2013
ciidamadda Dowladda Federaalka soomaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maanta ilaa shalay Magaalada Gudaheeda iyo Xaafadaha kala duwan kawaday howl galo ay kusoo qabteen dad Farabadan oo loga shakiyeey in Amaanka ay khal khal ku hayeen.
Ergayga Qaramada Midoobay ee Dalka Soomaaliya oo Goor-dhow ka dagay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baladweyne
Sagal Radio Services • News Report • December 14, 2013
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa markii ugu horreysay maanta gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ciidamad huwanta ahaa oo fariisimo Ciidan ka Sameystay inta u dhexeysa Magaalooyinka Baladweyne iyo Buulo-burte.
Sagal Radio Services • News Report • November 25, 2013
Xili maalintii shalay aheed ay Ciidanka ka soo ruqaansadeen magaalada B/weyn ee Xarunta Hiiraan ayaa waxa ay Ciidamada isbahaysanaya fariisimo ciidan ka sameystay inta u dhexeysa Buulo-burte iyo magaalada Balaweyne, iyagoo qorsheynaya inay la wareegaan degmada Buulo-burte oo ay ka taliso Al-shabaab.
Dhageyso:Hiraan oo lagu wado dhawaan in ay yelato maamul ay dadka spo doortaan sida uu ka dhawaajiyay wasiirka arimaha Gudana ee xukuumada Soomaaliya
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 23, 2013
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka Xukuumada Somaliya C/kiriin Xuseen Guuleed iyo wafdi uu hogaaminayey oo shalay gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay ka warbixiyeen halkay mareyso maamul usameynta gobolka Hiiraan.
Howl-galo ay Ciidanka amaanka ka sameeyeen Baladweyne iyo dad lagu soo qab-qabtay
Sagal Radio Services • News Report • November 22, 2013
Howl galo ballaaran oo si wada jir ah xaafadaha magaalada Beledweyn uga sameeyeen ciidamada booliska, kuwa milateriga iyo ciidamada Jabuuti ayaa lagu qab qabtay dhalinyaro fara badan, kuwaasoo looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.
Waxaa mar kale dib u dhacay xiligii logu tala galay in la qabto doorashada Maamulka Hiiraan Sababa la xiriira khilaafka madaxda sare
Sagal Radio Services • News Report • November 17, 2013
Doorashadii Maamulka Gobolka Hiiraan ee lagu waday inay ka dhacdo magaalada Beledweyna ayaa waxaa saameyn ku yeeshay khilaafka soo dhex galay madaxda dowladda, iyadoo wafdigii dowladda ka socday ee isugu jiray Wasiiro iyo Xildhibaano ay u baaqdeen arrimaha khilaafka jira.
B/weyne oo la ciir-ciiraya siyaasiyiin, xildhibaano iyo odayaal dhaqameed kala ra’yi ku ah maamul u sameynta Hiiraaan
Sagal Radio Services • News Report • October 17, 2013
wararka laga helaayo magaalada B/weyne ee gobalka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jiraaan caqabado waaweyn oo la xariira hanaanka maamul usameta gobalkaasi oo maraaya heer xaasaasi ah.
Wajigii ugu danbeeyay ee arimaha maamul u sameynta gobalka Hiiraan oo socda.
Sagal Radio Services • News Report • October 9, 2013
Waxaa magaalada B/weyne ee xarunta gobalka Hiiraaan ka socda wareegii ugu danbeeyay ee leesugu diyaarinayo maamul gobalkaasi loo sameeyo iyada oo ay xildhibaanno halkaasi ku qulqulayaan.